Kurambidza Kubhadhara, Kudyidzana, Kuvhara - Zvose Zvaunoda Kuziva
Muizvi Bitcoin sports kutengesa mutungamiri, tinoenda pane zvinhu zvitatu zvichakubatsira iwe, sebhetti, nzvimbo dzevatori dzinoderedza ngozi, kurasikirwa. Zvinogona kuuya sechinhu chinotyisa, asi izvi zvinogona kunge zvingaita kuti vashandise zvakanaka. Kuita zvekutengesa paIndaneti hakusi kufanana neBitcoin yako yakaoma-yakagadzirirwa pamutambo wako wemitambo uye unotarisira kuti inokura semuti. Pane zvakawanda zvekutengesa kuIndaneti pane zvinoratidzika. Iko kune mazano matatu ekubheja anoratidza kuti anounza nguva refu. Aya mazano matatu ekubheja ari arbitrage kubheji, kutengesa, nekukomba.
Kuenda kune tsanangudzo yemitemo mitatu yekutanga zvinhu:
Arbitrage kubheja - Imwe yezwi kune izvi scalping. Sezvo imwe neimwe Bitcoin sportsbook rinobudisa mikana yakasiyana, vatengesi vanogona kuchengetedza zvisarudzo zviri nani apo vanogona kushandisa zvinetso izvi kusiyana.
Kutengesa - Sezvo zviitiko zvemitambo zvinosvika padyo nepedyo kutanga (semuenzaniso, makwikwi mahombe emutambo wetsiva kana kutanga kwemwaka weligi) mikana yetimu yega yega kana mutambi anosanganisirwa muligi anokwira kana kudzika, zvichienderana nemamiriro avo. Ichi chinzvimbo chinogona kunge chiri kukuvara, kusashanda zvakanaka, nezvimwe zvakadaro. Vatengesi vanogona kushandisa hunhu uhwu kuti vabatsire mhedzisiro yesarudzo yavo. Kana iwe uchigona kufanotaura izvi, iwe wakazvivimbisa pachako kubhadhara.
Hedging - Kuisa imwe bheji pane yako yekutanga kubheja mune tarisiro yekubvisa kurasikirwa kana zvimwe, wedzera kuhwina.
Iye zvino zvauri iwe tsanangudzo huru nemabasa aya mazano matatu, iwe zvino unogona kushandisa aya matatu kuti ubatsire mabheti ako emitambo yeBitcoin.
Muenzaniso chaiwo weArbitering kubheti uri kutora mukana wekutengesa mutengo. Ngatiti iwe unowana t-shirt ne $ 5 tag tag, uye mushure mekutenga shati, unosangana nomutengesi anofarira t-shirt. Mutengi anoda kubhadhara $ 10 nokuda kwayo pakarepo. Kana iwe uchipfuurira nemari yacho, iwe wakangowana $ 5 usina kutora chero njodzi. Ndizvo zvakaita arbitrage kubheta.
Pane zvikonzero zveBitcoin mitambo yekutengesa zvinokonzera kusiyana kwavo. Zvichida vane maonero akasiyana pamusoro pekufananidza mutsara, sportsbooks inogona kunge yakashambadzirwa yezvimwe zvemitambo, uye kunonoka mukusunungura matambudziko angavakanganisa. Asi vatengesi vanogona kutora mukana mutsauko uyu mumakakatanwa. Mabhuku akawanda emitambo yevashandi veB Bitcoin anobvumira arbitrage kutengesa pamawebsite avo uye nguva dzose anovatsigirawo zvakare.
Zvinhu zvakawanda zvinogona kuchinja zvakanyanya kuguma kwechiitiko chemitambo. Uyezve, zvido zvekunakidza mutambo zvingasava nguva dzose yakagadzirisa. Zvinhu izvi zvinogona kuchinja izvo mune kumira kweziso. Zvimwe zvezvinhu zvinogona kuchinja mutambo ndezvenzvimbo yebhoti, yebhola, kana mitambo yekunze, nyeredzi kana key player iri kugara mutsva kunze kwekukuvara kana kurwara, nezvimwe. Sezvo mutambo wacho unoswedera pedyo nekukanganiswa, matambudziko achachinja kunyanya kana chimwe chezvinhu izvi chiri mukutamba nekuchinja. Saka, kana iwe uchikwanisa kufanotaura kuchinja uku musati mutambo uchitanga, iwe uri nhanho imwe pedyo nekukunda mabheti ako.
Kuvhara kunogona kuonekwa seinishuwarenzi. Iyo nzira yakananga nechinangwa chekusika kuchengetedzwa kwebhadhiro dzako, kukunda bitcoins nemitambo yekubheja, uye kubvisa kurasikirwa kwako. Iwe unogona kuita bheji yekutengesa nekuisa mubhadharo pamigumisiro yakasiyana neyokutanga yekutengesa. Semuenzaniso, iwe pari pabato repasi pasi kuti uhwine mutambo uye panguva imwechete uchiisa bhizimisi yekupedzisira kune waunoda kukunda mutambo. Ramba uchiyeuka, kunyange zvazvo iwe uchivimbiswa kukunda, hakuna chivimbo chokuti iwe unogona kupedzisa nemamwe bitcoins mu bankrolls yako. Kune nguva dzakasiyana-siyana apo kubvongodza kwaizoita kunzwisisika. Kunyange zvazvo achitsvaga pasi pangozi, pane pane inogona kuva mamiriro aungagona kupedza imwe yekutengesa nemari.
Kuti udzivise iyi mitambo yekutengesa mabhuku, maitiro aya ekubheja anogona kukuita kana kukuputsa. Asi nheyo yehurukuro iyi ndeyokukubatsira iwe kuti uve wepamusoro wekutengeserana mumutambo iwe unogona kuva. Iva nechokwadi chekuita tsvakurudzo yako kutanga wozoshandisa mazano aya echokwadi chekutsvaga moto.